» राजधानी काठमाडौंभित्रै ६०० भन्दा डाक्टर र नर्स कोरोनाबाट संक्रमित
राजधानी काठमाडौंभित्रै ६०० भन्दा डाक्टर र नर्स कोरोनाबाट संक्रमित
४ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:०५
काठमाडौं । कोभिड–१९ को संक्रमण पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्यकर्मीमा बढी देखिन थालेको छ । मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमित बढिरहेको बेला उपत्यकामा अग्रपंक्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमा पनि संक्रमण देखिन थालेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रत्यक्ष संलग्न हुने भएकाले संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकामा मात्र अहिलेसम्म ६ सयभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ । उनले कोभिड–१९ अस्पताल, कोभिड–१९ को परीक्षण गर्ने, होम आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, कन्ट्र्याट ट्रेसिङमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी बढी संक्रमण भएको बताए ।
उपत्यकामा अहिलेसम्म १५ हजार १३८ जना संक्रमण भइसकेका छन् । शुक्रबार मात्रै ८५९ जना संक्रमित भएका थिए। सबभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका कोभिड–१९ व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा सन्तकुमार दासका अनुसार शिक्षण अस्पताला १५० भन्दा स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये २१ चिकित्सक, अधिकांश नर्स र वार्ड सहयोग रहेका छन् । उनले संक्रमितमध्ये धेरै निको भएर घर फर्किसकेको जानकारी दिए। अहिले उक्त अस्पतालमा २७ जनामात्र स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय संक्रमित छन् ।
यस्तै वीर अस्पतालमा ११५ जना स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको छ । वीरका कार्यकारी निर्देशक डा केदार सेञ्चुरीका अनुसार तीमध्ये २५ चिकित्सक, ३५ नर्स र अन्य वार्ड तथा प्रशासनमा रहेका कर्मचारी रहेका छन् । संक्रमितमध्ये २५ प्रतिशत निको भएर काम गर्न आइसकेको उनले जानकारी दिए। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आठ जनामा संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये दुई चिकित्सक र अन्य नर्स रहेका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले दुई चिकित्सक र एक जना नर्सको निको भइसकेको र अन्य पाँच जना होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिए । अहिले मुलुकभरि ६१ हजार ५९३ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने ४३ हजार ८२० जना संक्रमण निको भएर घर फर्किसकेका र ३९० जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ । रासस
जनरल इन्स्योरेन्सको आईपीओ बाँडफाँड सम्पन्न, गोलाप्रथामार्फत दुई लाख ७३ हजारले पाए शेयर
जल शक्तिको उपयोगमा नेपाल–बंगलादेश–भारत त्रिदेशीय साझेदारी गर्नुपर्छ
निःशुल्क मुटु शिवरमा ७० जनाको मुटु परिक्षण
आज १२ बजेदेखि निःशुल्क मुटु परिक्षण शिविर सञ्चालन हुँदै
भोलिदेखि सबै सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय, आन्तरिक हवाई जहाज समेत उड्ने
विहानै काठमाडौंमा शक्तिशाली भुकम्पको धक्का
बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस, कुलमानको निर्णय भएन
खुल्यो लकडाउन, हट्यो निषेधाज्ञा, असोज ५ गतेबाट लामो दुरीका बस र हवाई यातायात खुल्ला
नेपाल आईडलको ग्राण्ड फिनालेको सुटिङ गर्दागर्दै कोरोनाको संक्रमण
मध्य कोरानाका बीच ६० जना सह–सचिवको सरुवा को कहाँ ? (सूचिसहित)
दोलखाका युवाले काठमाडौंको न्यूरोडमा खोले नयाँ सहकारी
www.samajonline.com परिक्षण प्रशारणको क्रममा रहेको छ । यसमा प्रकाशित समाचारप्रति कसैलाई कुनै गुनासो भएमा तलको इमेलमा लेख्न सक्नुहुनेछ ।
सम्पादक: के. थपलिया
कार्यालयः पुतलीसडक, काठमाडौं